Magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub: dalxiiskii Qaaraddii Hore | Safarka Absolut
Magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub
Luis Martinez | | kuwa kale
Ka hadalka magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub qoraal ahaan waa had iyo jeer shakhsi ahaan. Socdaal kasta oo soo safray Qaaraddii Hore wuxuu leeyahay dhadhankiisa iyo welwelka u gaarka ah sidaa darteed, wuxuu ka doorbidi doonaa meelaha qaarkood meelaha kale. Haddii aad tahay qof jecel taariikhda qadiimiga ah, waxaad ku raaxeysan doontaa daawashada Roma oo waxaad ka heli doontaa kuwa aad ugu jeceshahay. Dhinaca kale, haddii waxa aad jeceshahay ay yihiin qarniyadii dhexe, waad ka dhex heli doontaa Bruges meesha aad ku socoto Sidoo kale, haddii aad u tixgeliso naftaada jacayl oo aad u bogaadiso rinjiyeynta wanaagsan, waxay noqon doontaa Paris meesha aad joogto guriga.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr degmo oo ku raaxeysta loo dhan yahay markaad dooraneyso magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub. Markaan isku darno waxan oo dhan, waxaan ku tusi doonnaa soo jeedinteena. Waxaa laga yaabaa inaadan gabi ahaanba ku raacsaneyn iyada ama laga yaabo inaad adigu ku raacdo. Laakiin, sidaan kuu sheegnay, waa liis shaqsiyadeed.
1 Qaar ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub
1.1 Rome, Magaalada Aakhiro
1.2 Paris, jacayl iyo qurux
1.3 Florence, sixirka Stendhal
1.4 Bruges, waa yaabka qarniyadii hore
1.5 Amsterdam, magaalada matxafyada
1.6 Prague, gogosha qorayaasha waaweyn
1.7 Budapest, mid kale oo ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub
1.8 Ljubljana, jawharad ka mid ah dalka Slovenia
1.9 Edinburgh, sumadda waqtiga ee magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub
1.10 Saint Petersburg, raaxada ay leeyihiin, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub
Qaar ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub
Dib u eegis lagu sameynayo wadamada Qaaraddii Hore waxay muujineysaa in dhammaantood ay jiraan meelo qurux badan oo u qalma booqashadaada. Sidoo kale way adagtahay in dhammaantood lagu daro. Laakiin, iyada oo aan la sii amba-qaadin, aan la tagno soo-jeedintayada.
Rome, Magaalada Aakhiro
Caasimaddii Talyaaniga, oo iyaduna ahayd caasimadda boqortooyadii ugu weyneyd ee soo jireenka ahayd, guryo ku yaal waddooyinkeeda ayaa ka taariikh iyo qaab dhismeed badan magaalooyin kale oo adduunka ah. Mid ka mid ah astaamaheeda ugu waaweyn waa Coliseum, mid ka mid ah astaamaha badan ee xilligii Laatiinka oo ay weheliyaan hadhaagii Forum iyo alaabo kale oo badan.
Sidoo kale cajaa’ib waa dhaxal diimeedkeeda. Waxaan kugula talineynaa inaad sameyso wicitaanka "Xajka toddobada kaniisadood ee Rome", oo ay ka mid yihiin, kuwo kale, yaabab sida Basilica-ka San Juan de Letrán, tii San Pedro, labadaba Vatican City; kan Santa María la Mayor ama kan iskutallaabta Qudus ee Qudus.
Dhaxalka qaab dhismeedka madaniga ah gadaal ugama socdo Rome, oo leh daaraha waaweyn sida kuwa Quirinal, Montecitorio, Madame ama midda Baaritaan. Iyo agtooda, ilo qaali ah sida Trevi Fountain, mid kale oo ka mid ah astaamaha Rome, iyo laba jibbaara sida tan Espana ama Navona. Waxaas oo dhan iyada oo aan la xusin xad-dhaafka matxafyada ay ku siiso Magaalada Daa'imku.
Paris, jacayl iyo qurux
Caasimadda Faransiiska kama maqnaan karto liiska magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub. U dhaw Dalxiis, waa magaalada ay ku kulmaan dadka ugu jecel sanadka dhamaadkiisa. Laakiin, marka lagu daro, taageere kasta oo rinjiyeynta ah waa inuu soo booqdaa, ugu yaraan hal mar noloshooda, the Matxafka Louvre.
Astaamaheeda, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso astaantooda ugu weyn: Eiffel Tower. Laakiin sidoo kale Notre Dame Cathedral, ka basilica Royal ee Saint-Denis ama taas Qalbi xurmaysan marka la eego qaab dhismeedka diinta iyo kakoobanka Fagaaraha Concorde, Qaadashada Guushaah Aan ansax ahayn, ka Wadajirka ama Dugsiga militariga marka laga hadlayo madaniga
Waxaas oo dhan iyada oo aan la iloobin layaabka sida Champs Elysees, jardiinooyinka Trocadero ama Tuileries iyo, dabcan, wacdaraha Dhismaha qasriga Versailles, muujinta ugu badan ee quruxda dhismaha oo waliba leh beero qurux badan.
Fagaaraha Florence Signoria
Florence, sixirka Stendhal
Waxaan ku laabanay Talyaaniga si aan u soo booqano yaab kale oo sababtay Stendhal cilladda caanka ah ee dalxiis uhu ku xanuunsado markuu ka fiirsanayo quruxdaas. Waxaan ka hadlaynaa Florence, oo xarunteeda taariikhiga ahi tahay Goobta Dhaxalka Adduunka.
Meelaha lagu arko magaalada Tuscan waa kuwa cajiib ah Katidralka Santa Maria del Fiore, oo leh qubbad ay soo saarto; ah Qasriga Vecchio, oo ku yaal Fagaaraha Signoria; buundooyinka Old iyo Holy Holy ama buundooyinka basilica ee San Lorenzo.
Iyo, oo ay weheliso taalooyinkeeda, Florence waxay leedahay qaar ka mid ah matxafyada ugu muhiimsan adduunka. Waxaa ka mid ah Gawaarida Uffizi, kaas oo ku yaal ururinta ugu weyn ee rinjiyeynta Renaissance adduunka, iyo Gallery Akaademiga, halkaas oo aad ka arki karto Michelangelo 'David'.
Hoolka Magaalada Bruges
Bruges, waa yaabka qarniyadii hore
Waxaa loo yaqaan "Venice of the North" kanaallada ku dhex socda dartiis, Bruges sidoo kale waxay leedahay xarun taariikhi ah oo ah Goob Dhaxal Adduun. Tan waxaa lagu qeexay hareeraha Calaamadeeyay ama Plaza Duqa magaalada, halkaas oo cajiib ah Munaaraddii dawanka taas oo astaan ​​u ah magaalada. No ka yar cajiib ah waa dhismaha ah Hoolka Magaalada, fagaaraha Burg.
Marka laga hadlayo qaab dhismeedka diinta, booqashooyinka lama huraanka ah waa cathedral ee san salvador, ka kaniisadda Our Lady of Bruges, ka basilica ee dhiigga quduuska ah iyo Beguinage, dhisme dhisme oo gaar ah oo loo dhisay in lagu xareeyo Beguines, oo ah shir ay isugu yimaadeen haween Masiixiyiin ah oo ku baahsan Flanders.
Amsterdam, magaalada matxafyada
Magaaladan Nederlandka sidoo kale waxaa lagu caddeeyey kanaallada. Xarunteeda neerfaha waa Fagaaraha Damm, taas oo ah Royal Palace iyo Kaniisad cusub. Laakiin sidoo kale waa inaad booqataa Amsterdam ee Begijnhof, koox guryo ah qarnigii XIV oo la mid ah Beguinale of Bruges; ah Guriga Anne Frank, Kuwa caanka ah Degmada iftiinka cas iyo maqaaxiyo u gaar ah.
Laakiin wax walba ka sarreeya, magaalada Nederland waxay caan ku tahay matxafyada. Muhiimadu waa booqashooyinka Guriga Rembrandt, at Van Gogh iyo Botanicus Hortus. Si kastaba ha noqotee, kuwa ugu caansan waa museum qaranka, kaas oo ku yaal mid ka mid ah uruurinta ugu muhiimsan ee rinjiyeynta adduunka gaar ahaan marka loo eego dugsiga Nederlandka Timaha iyo tiisa Rembrandt sida macalimiin waaweyn.
Prague, gogosha qorayaasha waaweyn
Caasimadda Czech waxay ahayd halka ay ku dhalatay hal-abuurka suugaanta sida Franz Kafka o Rainer Maria Rilke, laakiin sidoo kale waxay leedahay dhaxal aan caadi ahayn. Xaqiiqdii, xarunteeda taariikhiga ahi waa Goob Dhaxal Adduun.
Xarunteeda neerfaha waa fagaaraha magaalada hore, halkaas oo aad ka arki karto dhismaha gothic ee Hoolka Magaalada (leh Saacadda xiddigiska) iyo tan cajiibka ah Kaniisadda Our Lady of Týn, oo leh munaaradihiisa cajiibka ah in ka badan sideetan mitir.
Si kastaba ha noqotee, astaanta weyn ee Prague waa soo rogitaankeeda Castillo, oo runtii ka kooban dhismooyin isku xira jidadka dhexe. Kuwaas waxaa ka mid ah Alley Dahab ah, oo leh guryo duug ah oo duug ah. Laakiin St. Vitus Katidral, oo leh muraayadaha muraayadaha muraayadaha cajaa'ibka leh oo aad ka helaysid taajirkeeda aragtiyaha cajiibka ah ee magaalada Iyo waliba kan basilica ee St. George iyo duug Royal Palace. Ugu dambeyntiina, waa inaadan ka tagin Prague adigoon booqan mid ka mid ah soo-saareyaasheeda dhaqanka.
Budapest, mid kale oo ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub
Haddii xarunta taariikhiga ah ee Prague ay tahay Goobta Dhaxalka Adduunka, caasimadda Hangari waxay leedahay dhowr meelood oo leh tixgelin isku mid ah, taas oo fikrad kaa siin doonta quruxda ay magaaladani leedahay, ee ay aasaaseen midowgii Buda iyo Cayayaanka.
Midka hore ayaa ah kan Qasriga Buda, bangiyada Danube. Dhismahan cajiibka ah waxaa la dhisay qarnigii XNUMX-aad kadib dabayaaqadii goonnigii Gothic. Si kastaba ha noqotee, muuqaalka ay maanta umuuqato waxaa sabab u ah dib u dhiska lagu sameeyay dagaalkii labaad ee aduunka kadib qaab qaab neoclassical ah. Xilligan waxaad booqan kartaa matxafyada sida Xulka Qaranka Hungary.
Sidoo kale waa Goob Dhaxal Adduunka ah Wadada Andrassy, oo lagu qaabeeyey daaritaanno cusub oo qurux badan ama daaraha waaweyn iyo mid ka mid halbowlayaasha ganacsiga ee magaalada. Hal dhinac waa geesiyaal square, kaas oo waliba haya qaybtaas. Dhexdeeda waxaad ka arki kartaa Xusuusta Millennium, Taallo cajaa’ib leh oo loogu talagalay hoggaamiyeyaasha qabiilooyinka hore ee Magyar. Dhinacyadiisana waxaad ka heli doontaan dhismayaasha Matxafka Farshaxanka Fiican iyo Qasriga Fanka.
Laakiin kuwa la xusay waa uun qaar ka mid ah meelaha xiisaha leh ee caasimada Hangari ku siiso. Waxa kale oo aad booqan kartaa dhismaha baarlamaanka, ee qaabka neo-gothic; ah basilica cathedral ee waliin stephen, dhisme neoclassical cajiib ah; ah qasriga boqortooyada, Sandor y Gresham ama Qasriga Vajdahunyad, oo ku yaal Beerta magaalada. Sidoo kale, ha joojin inaad eegto Bastion Kalluumeysatada, ku xigta kuwa qaaliga ah kaniisadda San Matías, oo u fiirso Danube.
Ljubljana, jawharad ka mid ah dalka Slovenia
Caasimadda Slovenia waa magaalo aad uga yar magaalooyinkii hore, laakiin waxay kuu haysaa waxyaabo yaab leh oo la yaab leh. Waxaa ku xoog badan kuwa xoogga badan qalin oo ku taal buur oo la dhisay intii u dhaxaysay qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad oo ku taal hadhaagii hore, Ljubljana waxay leedahay qurux badan cathedral quduus nicholas, Qaabka Baroque, iyo waliba macbadyo kale sida Kaniisadaha ku dhawaaqida iyo San Pedro.
Waa inaad sidoo kale aragtaa buundada masduulaaga. Waxaan kuu sheegi doonaa in xayawaanadan quraafaadku ay yihiin astaanta Ljubljana waxaana laga helaa meelo badan oo magaalada ah. Buundadan casriga ah waa mid ka mid ah dhismayaasha ugu matalaya iyo sidoo kale mid ka mid ah tusaalooyinka badan ee dhaqdhaqaaqan farshaxan ee aad ku arki karto caasimadda Slovenia. Dareenkan, waxaan kugula talineynaa Guryaha Hribar, Krisper iyo Bamberg.
Qeyb ahaan, Hoolka Magaalada Waa baroque iyo qasriga zois, neoclassic. Sidoo kale, dhismaha Opera Waa neo-baroque oo cajiib ah Jaamacadda shaqo soo noolaynta cusub. Ugu dambeyntii, waxaan kugula talineynaa inaad u dhawaato Beerta Tivoli, iyo qalcaddeeda iyo iyada Guriga Cekin, xarunta dhexe ee Matxafka Qaranka ee Taariikhda Casriga.
Edinburgh, sumadda waqtiga ee magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub
Waxaa ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub, in yar ayaa muujineysa dhaafitaanka qarniyaal si cad sida Edinburgh. Sababtoo ah caasimadda Iskotishku waxay u qaybsan tahay magaalada quruxda badan ee Old Town iyo New Town, taas oo, inkasta oo magaceedu yahay, horumartay bartamihii qarnigii XNUMXaad. Mid iyo ka kaleba waa Goobaha Dhaxalka Adduunka.
La Old Towna ayaa u dhexeeya Qalcaddii Edinburgh, qalcaddii qarnigii XNUMXaad ee cajiibka ah oo sifiican loo ilaaliyay, oo qurux badan qasriga Holyrood. Waa waxa loo yaqaan Mile Royal, afar waddo oo ay dhisteen guryo laga soo bilaabo qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad halkaasoo aad sidoo kale ka heli doontid dhismayaal kale oo astaan ​​u ah magaalada. Sidaas, cajiib ah Saint Giles Cathedral, Dhismo Gothic ah oo qotominta qaab-taajka u eg ay ka muuqato; ah Matxafka Qaranka ee Iskotland iyo Jaamacadda Edinburgh.
Qeyb ahaan, Magaalada cusub waxay ilaalisaa qayb weyn oo ka mid ah dhismayaasheeda neoclassical. Tusaale ahaan, kan Gallery Qaranka ee Scotland ama tii Bangiga Royal. Wadadeeda ugu weyn waa Wadada Princes Street, ganacsi aad u badan, oo barbar socda jardiinooyinka isku magaca ah, baarkin qurux badan oo taalooyin iyo munaarado badan leh. Kuwaas waxaa ka mid ah taagan Scott Monument, oo loo dhisay sidii cashuur loo qoro qoraalka Walter scott, dhalasho ahaan ka soo jeeda Edinburgh.
Qasriga Jiilaalka ee St.
Saint Petersburg, raaxada ay leeyihiin, waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub
Lagama waayi karin sharraxaaddeena magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub Saint Petersburg, oo ay abuureen Tsar Peter weyn ee aad rabto. Waxay ku taal bannaanka Webiga Neva, macquul maahan in lagu qeexo xariiqyo dhowr ah wax kasta oo aad ku arki karto magaaladan quruxda badan.
Laakiin waa inaad booqataa xarunteeda taariikhiga ah, oo ka kooban inta badan baroque iyo dhismayaasha neoclassical, oo sidoo kale ah Goobta Dhaxalka Adduunka. Jasiiradda yar ee Záyachi waxay ku taal meel xiiso leh Qalcadda Saint Peter iyo Saint Paul, gudaheeda waxaa ku jira Kaniisad oo isku magac ah, oo u adeegay sidii xabaal dhammaan taarikhda tan iyo, sida saxda ah, Peter the Great.
Qalcadda agteeda, waxaan kugula talineynaa inaad booqato dhismayaasha sida kuwa quruxda badan Kunstkamera, oo leh muuqaal buluug ah oo buluug ah; mid ka mid ah Laba iyo toban kuliyadood ee St. Petersburg, jaamacada hada jirta; ah Qasriga Menshikov, tusaale ahaan la safeeyey ee Petrine Baroque, ama tii Akadeemiyada Imperial ee Farshaxanka ama qasriga shuvalov. Si kastaba ha noqotee, magaalada Ruushka waxay leedahay waxyaabo badan oo la arko. Tusaale ahaan, cajiib ah Qasriga jiilaalka, hada xarun u ah Matxafka Hermitage; quruxda iyo qurxinta kaniisadda badbaadiyaha; kan aan ka weyneyn Qasriga Catherine, oo xagaagii ay daganaayeen tsars laftooda, ama gigant Cathedral of Our Lady ee Kazan.
Qeyb ahaan, Wadada Nevsky Waa wadada weyn ee Saint Petersburg. Waxay ka buuxsameysaa waxyaabo is-khilaafsan, oo ka bilaabma ku-qanacsanaanta illaa ku-dheellitirka iyo dhismayaasha taariikhiga ah ilaa dukaamada caanka ah ee casriga ah Laakiin, marka lagu daro qaar ka mid ah kuwii hore loo soo sheegay, waxay leedahay dhismayaal aad u qurux badan sida qasriga stroganov, oo leh midabkiisa casaanka ah; ah Guri heesaa, qaab noveau art; qaaliga ah Basilica ee Saint Catherine ee Alexandria, oo leh hawadeeda neoclassical; Khuraafaadka Tiyaatarka Alexandrinsky ama neo-baroque-ka Qasriga Beloselski.
Gabagabadii, waxaan kaaga warranay magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub. Si kastaba ha noqotee, sidaan kuu sheegnay, waxaan sameynay liis shaqsiyadeed maxaa yeelay socdaal kasta wuxuu leeyahay dhadhankiisa. Xaqiiqdii, meelo kale oo aad u qurux badan sida kii Talyaaniga ayaa si fiican uga dhex muuqan kara xariiqyadan Milan, Reer Beljam Ghent o Leuven, deenishka Copenhagen ama britishka London y Dublin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub
Meelaha ugufiican Mallorca
Maxaa lagu arkaa jasiiradaha Azores